Knowledge – Page 21 – SanThitLa
အနံမရတော့ သူများ အတွက် အဓိဌာန်အောင် နယ် လှည့်သာသနာပြု ဆရာတော် ဘုရားကြီး မိန့်ပြီဗျာ
Writer | October 4, 2020
အနံမရတော့ သူများ အတွက် အဓိဌာန်အောင် နယ် လှည့်သာသနာပြု ဆရာတော် ဘုရားကြီး မိန့်ပြီဗျာ အနံ့မရတော့တဲ့သူများ အတွက် အဓိဌာန်အောင်နယ်လှည့် သာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မိန့်ကြားချက်(၂၀.၉.၂၀၂၀) အဓိဌာန် အောင်နယ် လှည့်သာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ အနံ့မရတဲ့သူများ အတွက်တစ်နေ့(၁)ကြိမ် တစ်ယောက်ကို ဂျင်း ကွမ်းသီးလုံးလောက် နှင့် ကြက်သွန်နီ အနေတော်အရွယ် (၃)လုံးတို့အားအခွံနွှာ၍ရောပြုတ်ပြီးအရည်ကိုသောက်ကြက်သွန်ကိုစားရန်နှင့်မန်ကျည်းသီး(၅၅)ကျပ်သားအား(၃)လုံး လုံးပြီး(၂)ရက်တစ်ခါတစ်လုံးကျစီကိုရေဖျော်၍ဂေါင်းမှလောင်းချိုးရန် မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
စတုတ္ထ တန်းကျောင်း သား ငြိမ်းမောင် ရဲ့ ရည်းစားစာဖ တ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး
စတုတ္ထ တန်းကျောင်း သား ငြိမ်းမောင် ရဲ့ ရည်းစားစာဖ တ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး ဆရာ မ သား ကို ဖိုးထောင်ဖင်ချတယ်။ဟေ ငြိမ်းမောင် တိုင်လိုက်သည့်စကားကြောင့် ဆရာမ ငေါက်ခနဲ မတ်တပ် ထရပ်လိုက်သည်။ သူတိုင်လိုက်သည်ကိုတော့ အတန်းထဲမှ မည်သူမှ မကြားလိုက် ဖိုးထောင် လာစမ်း ဆရာမ
အိမ်တ အိမ် မှာ လာဘ်လာဘ ပေါများစေ ဖို့ ဆောင်ရန်/ရှောင် ရန် အချက် များ
အိမ်တ အိမ် မှာ လာဘ်လာဘ ပေါများစေ ဖို့ ဆောင်ရန်/ရှောင် ရန် အချက် များ လာဘ် မတိတ်အောင် ဒါတွေဆောင်” အိမ်ထောင်စုတစ် ခု သာယာချမ်းမြေ့ဖို့ဆို သည်မှာ စီးပွားရေးကဏ္ဍကို ချန်လှပ်၍မဖြစ်။ လာဘ် လာဘတွေ ပွင့်လန်းနေပါမှ လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝစွာ ဖန်တီးနိုင်လျက် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေလိမ့်မည်သာ ဖြစ်၏။ “အလုပ်လည်း
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့ ကိုရင်လေးနဲ့မယ်တော်ရဲ့ သောက
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့ ကိုရင်လေးနဲ့မယ်တော်ရဲ့ သောက။ မယ်တော်မငိုနဲ့နော် ကိုရင်ကျန်းမာပါတယ် စာချဆရာတော်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ ဆုးံမသြဝါဒတွေနဲ့ ကိုရင်တို့မကြောက်ပါဘူး ဒကာဗိုလ်ကြီးတွေကလည်း ကောင်းကောင်း ဂရုစိုက်ကုပေးကြပါတယ် မယ်တော်မငိုနဲ့နော် ကိုရင်တို့ ဆေးကုပြီးသွားရင် စာသင်တိုက်ကြီးကိုပြန်ရမှာပါ မယ်တော်မငိုနဲ့နော် မယ်တော်တော့ မသိဘူး တစ်ကယ်မျက်ရည်ကျမိပါတယ် သေချာပေါက်ပြန်ကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည် နေပါတယ်ဘုရား အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို
ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သော အဘဆရာကြီး မင်းသိင်္ခပြောကြားခဲ့တဲ့ ထီပေါက်စေနိုင်သော နိမိတ်ပြအိမ်မက်အကြောင်း
“ထီပေါက်စေတဲ့ နိမိတ်ပြအိမ်မက်”။ အိပ်မက်ကို လူတိုင်းမြင်မက်ပါတယ်။ အိပ်တာနဲ့မက်တဲ့ အိပ်မက်မျိုးက သွေးလေချောက်ချားပြီး မက်တဲ့အိပ်မက်၊ ရှေးယခင်က ခံစားဖူးတာကို အကြောင်းပြုပြီးမက်တဲ့ အိပ်မက် နတ်ဆိုးနတ်ဝါးတွေ လှည့်စားလို့မက်တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးရယ် ဟူရယ် အိပ်မက်သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ မိမိတို့အိပ်မက်၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကို ကြိုတင်၍ သတိမထားသည့်အတွက် အကျိုးခံစားသင့်သောအရာများ လွဲချော်သွားသည်လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဘဆရာကြီး မင်းသိင်္ခပြောကြားခဲ့တဲ့
ကိုဗစ် နဲ့ ပက်သက် လို့ သတိထားသင့် တဲ့ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်ကျဆင်းခြင်း
ကိုဗစ် နဲ့ ပက်သက် လို့ သတိထားသင့် တဲ့ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင်ကျဆင်းခြင်း အခု မြန်မာနိုင်ငံ က ကိုဗစ်မှာ သတိထားမိလာတဲ့ အချက်တစ်ခုက လူနာတွေဟာ brought dead လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးရုံကို အသက်သေဆုံးပြီးမှ ရောက်ရှိခြင်း ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆေးရုံရောက်ပြီး ခဏအတွင်း ဆုံးပါးခြင်းတွေ သာမန်ထက် နည်းနည်းပိုများနေတာကို
ကူး စက်သူတွေ သောင်းချီလာ ရင် လွဲမှားနိုင် တဲ့ လူနာစာရင်း နဲ့ မဖြစ်မနေသုံးရမယ့် ကုတ်စနစ်
Writer | October 3, 2020
ကူး စက်သူတွေ သောင်းချီလာ ရင် လွဲမှားနိုင် တဲ့ လူနာစာရင်း နဲ့ မဖြစ်မနေသုံးရမယ့် ကုတ်စနစ် လူ အများကြီး ကူးစက်လာနိုင်တယ် လို့ ကျနော် ထုတ်ပြောတယ်။ သို့သော် ဆဲကြတယ်။ ဒါလည်း အဆန်းမဟုတ်ဘူးလေ။ သူများနိုင်ငံတွေ သိန်းသန်းချီ ဖြစ်နေတာ ကြည့်ရင် သိနိုင်တာပဲ။ အဲလောက်နံပါတ်များလာရင် အမည် အသက်
ကိုယ်ဝန် ကြီး နဲ့ မို့ မလုပ်ပါ နဲ့ပြော တာ ကို ပြော မရ၍ မခံနိုင် တဲ့ အဆုံးမှာ ရပ် ကွက် ရုံး တိုင်ကြား ခဲ့ ရ တဲ့ အဖြစ်
ကိုယ်ဝန် ကြီး နဲ့ မို့ မလုပ်ပါ နဲ့ပြော တာ ကို ပြော မရ၍ မခံနိုင် တဲ့ အဆုံးမှာ ရပ် ကွက် ရုံး တိုင်ကြား ခဲ့ ရ တဲ့ အဖြစ် “မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူး နဲ့ကို တိုင်မှာ” “မိန်းမက လည်းကွာ… ငါက
မိုက်ခရိုစကုတ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအခြားကမ္ဘာတစ်ခုကိုရောက်သွားသလိုမျိုးထူးဆန်းမှုတွေကိုယူဆောင်လာပေးနိုင်တဲ့အကျိုးရှိလှတဲ့တီထွင်မှုတွေထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုမိုက်ခရိုစကုတ်နဲ့ချဲ့ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံအချို့ကိုစုစည်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁)လျှာ (၂)အရိုး (၃)အူသိမ် (၄)နှလုံးအတွင်းရှိသွေးလွှတ်ကြောများ (၅)အရေးပြား (၆)မျက်စိကြော (၇)ကျန်းမာနေသောအဆုတ် (၈)ကင်ဆာဖြစ်နေသောအဆုတ် (၉)သွေး (၁၀)သားအိမ်တွင်သန္ဓေအောင်စပုံ (၁၁)ဆံပင်အဖျား (၁၂)Purkinje အာရုံကြော (၁၃)သွား (၁၄)သွားပေါ်ကသွားချီးအတွင်းရှိဘတ်တီးရီးယားများ (၁၅)အင်ဆူလင်ပုံဆောင်ခဲ (၁၆)လက်သည်း Credit – shweapk
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့ကြီးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိတဲ့Bollywood ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီး အမီးရ်ခန်း နေထိုင်သတဲ့။သူက အရမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုပဲ။အခုလို Covid ကာလမှာ သူက လူတွေကို ​​​​ေဝ ငှသတဲ့။သူ ဂျုံကြမ်းအထုပ်ကလေးတွေ အများကြီးထုပ်ထားတယ် လာယူကြပါလို့ ပြောသတဲ့။မြို့နေလူထုကလည်း အံဩသွားပြီး ဝေဖန်မှု့တွေမြင့်တက်လာ သတဲ့” ဒီလောက်ချမ်းသာတာ ဂျုံကြမ်းမှုန့်ပဲပေးတာလား? စေတနာမကောင်းဘူး… ပေးချင်တယ်ဆို ဂျုံအနုမှုန့် ကောင်းတာပေးပါလား???ပိုက်ဆံပေးပါလား ပေါ်ပင်လုပ်တာ
Newer 1 … 19 20 21 22 23 … 35 Older
ရင်နင့်စရာနောင်တတွေ ကြုံရတော့မည့်ဆဲဆဲ ကံကောင်းသွားတဲ့ ကလေးမိခင်